musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Rufu Tourism: Kufamba uine chinangwa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kuronga kufamba? Kurudziro yako inogona kuzowira mune rimwe remabhokisi aya:
1. Kushanya kushamwari uye mhuri
Chii chisipo kubva pane izvo zvinyorwa? Vanhu vanofamba kuti vazviuraye.
Kufa kwekushanya (imwe mhando yekurapa kwekushanya) inzira iyo vanhu vasina-chirwere vanorwara vachienda kune imwe nzvimbo uye kunyorera masevhisi emakiriniki erufu kuvabatsira kupedza hupenyu hwavo. Zvidimbu zve "kushanya kwekufa" zvinosanganisira "kuzviuraya" uye "kubatsira kuzviuraya uye euthanasia." Nekuzviuraya chaiko, murwere pakupedzisira anotora hupenyu hwake.
Sterbe Tourismus izwi reGerman rinoreva rwendo rwemunhu anobva munyika uko euthanasia uye / kana rubatsiro mukuzviuraya zvinorambidzwa kunzvimbo iyo imwe kana ese maitiro ari, pasi pemamwe mamiriro, anotenderwa nemutemo, unobvumidza manejimendi aya marapirwo ekurapa kumunhu.
IAmerican Medical Association inotsanangura chiremba akabatsira kuzviuraya (PAS) se "chiremba ari kubatsira kufa kwemurwere nekupa nzira dzinodiwa uye / kana ruzivo kugonesa murwere kuita chiito chinogumisa hupenyu." Nepo murwere achiwana rubatsiro kubva kuna chiremba - kungave muchimiro chemishonga, kurairirwa, kana kurairwa - chinhu chakakosha ndechekuti murwere haakwanise kuzviita ega
Page 1 pamusoro 4 Prev Next